ကမ္ဘာကြီးအတွက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ရှိသော ထူးဆန်းလူသား ၂၃ ဦး - ONE DAILY MEDIA
ကမ္ဘာကြီးအတွက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ရှိသော ထူးဆန်းလူသား ၂၃ ဦး
အလှအပစံနှုန်းများသည် မကြာခဏပြောင်းလဲနေပြီး ၎င်းကို လိုက်မမှီနိုင်သလောက်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အလှတရား၏ စံနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲရုံသာမက ယဉ်ကျေးမှုများမှာလည်း ကွဲပြားနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဒဏ္ဍာရီလာ အလှတရားစံနှုန်းများနှင့် မည်သို့ ကိုက်ညီနိုင်ပါသလဲ ? အလှတရားသည် တိုင်းတာ၍မရသော၊ နှိုင်းယှဥ်အကဲဖြတ်၍မရသော အရာဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သော ပုံမှန်မဟုတ်သော အသွင်အပြင်ရှိသူများကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ အလှတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စိတ်အတွင်း၌ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သော မမြင်နိုင်သော အဖိုးတန်အရာဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဤပုံမှန်မဟုတ်သော အသွင်အပြင်များ၏ အလှတရားများကို အလွန်သဘောကျမိနေပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကို သင်အားမျှဝေရန် မစောင့်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။
1. လှပခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ??
အလှအပစံနှုန်းများနှင့် ပြည့်မီသည်ဟု ဆိုလိုပါသလား??
2. သို့မဟုတ် လှပသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခံရမည့်သူတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
3. သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုဟုဆိုလိုနိုင်ပါသလား ??
7. အလှတရားကို အမှန်တကယ် တိုင်းတာနိုင်ပါသလား??
8. မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တစ်စုံတစ်ရာ တည်ရှိနေပါသလား??
9. အလှတရားဟာ မျက်စိ၌သာရှိပါတယ်…
10. အလှတရားဟာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင် အရာတစ်ခု…
13.. ပုံသေကားချပ်များကို ခွင့်မပြုပါနှင့်
14 အခြားသူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များဟာ သင့်ယုံကြည်မှုကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
18. ပန်းတိုင်တွေနောက်ကို လိုက်လျှောက်ပါ…
A post shared by Incognito (@unusual___beauty)
19. အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာပါစေ!
ဘယ်သူရဲ့ အသွင်အပြင်ကို သင် အံ့အားအသင့်ဆုံးလဲ။ ဒီလို ထူးထူးခြားခြား လှပတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မြင်ဖူးပါသလား။ သင့်အတွေးအမြင်များနှင့် ပုံများကို မှတ်ချက်များတွင် လွတ်လပ်စွာမျှဝေနိုင်ပါတယ်
Tim Flach ၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်နှင့် ရှားပါးပြီး မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးရှိသော ငှက်များ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဓာတ်ပုံ (၂၀)
လူအများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းစားနိုင်ဖို့ Photoshopပြုလုပ်ဖို့ မလိုသည့် ဓာတ်ပုံများ